Tsvagiridzo Riri Kutengeswa mu Zimbabwe
Unoda rubatsiro rwehunyanzvi kunyora? Tora bepa remhando yepamusoro kubva kune rakanakisa Revhizheni Riri Kutengeswa mu Zimbabwe yakanyorerwa kumatanho ese edzidzo.
Tsvagiridzo Riri Kutengeswa
Uri kutsvaga bepa rekutsvaga riri kutengeswa? Iwe unogona kuve mumwe wemamirioni evadzidzi vekoreji avo vari kungotanga kuenda kuburikidza nekunyora uye kutsvagisa chikamu chekoreji. Kana iwe waona kuti yako yekoreji basa yanga ichidhonza zvishoma, kana iwe uri kunetseka kuwana kuburikidza nayo, iwe ungangoda kutsvaga izvo iwe zvaungaite kubatsira kubatsira kukurumidza zvinhu.
Kune akawanda makoreji anopa epamhepo kutsvagisa uye kunyora makosi, asi havazi vese vanozviita zvakaenzana. Vamwe vanozopa yakaderera kirasi mamakisi, nepo vamwe vangakupa iwe yakawanda nguva yekufunga uye kutarisa pabepa rako. Mamwe mayunivhesiti anotopa 'maawa ekudzidza.' Saka, usati watora makosi ako ekoreji, ita shuwa kuti iwe unotarisa izvo zvinodiwa kosi uye rudzii rwegiredhi iwe rauri kuzowana. Izvi zvinokuudza kana iwe uchizoda kuenda kukoreji kana kutora online makirasi kuti uwane degree rako.
Kana iwe uchida kuenda kukoreji, tarisa iwo makosi anopihwa online uye uye kana ari kana kwete iwo ane hukama neako makuru. Iwe unogona kuona kuti kune mamwe makosi epamhepo akaenzana nekosi yechinyakare kosi, kunyanya kana iri yepamusoro kosi kosi. Saka, tarisa pane zvaunogona kuona kuti uone kuti ndeapi marudzi emakirasi epamhepo aunogona kutora.
Paunenge uchitsvaga pepa rekutsvaga riri kutengeswa, edza kuona kuti inguvai yauchazofanira kudzidza. Unogona kushandisa chirongwa chinonzi Microsoft Word chinokutendera kuti uronge basa rako, uye woongorora mapepa aunofanira kupfuura. Iwe unogona zvakare kuita izvi nechero ipi yemamwe mapurogiramu ekugadzirisa mazwi aungave uri kushandisa, asi chirongwa cheMicrosoft chinonyanya kubatsira.
Vamwe vanhu vanoona kuti kuwana muperekedzi kunogona kuvabatsira mukutsvagisa kwavo nekunyora. Varairidzi ava vanonyatso kukuitira kunyora uye vobva vakupa mhinduro nezvazvo. Asi, iwe uchiri kuda kuterera kune iyo ruzivo iyo yavanokupa iwe. Ichi ndicho chikonzero zviri nani kudzidza kudzidza kunyora ako mapepa panguva imwe chete yauri kudzidza nezvekuti ungaanyora sei. Uye kana iwe uchinge waziva maitiro ekunyora iko, iwe unogona ipapo woendesa pamusoro kune mumwe munhu.
Iwe zvakare unodawo kuwana yakanaka koreji bhuku rekuverengera kuverenga pamusoro naro. Zviri nyore kwazvo kuvhiringidzika, kunyanya kana iwe usinganzwisise zvinhu zvakanaka. Ichi ndicho chikonzero bhuku racho rinofanira kuve gwara rakanaka rekufunda futi. Inofanira kutsanangura zvinhu nenzira yekuti unokwanisa kuzvinzwisisa nekukurumidza uye nyore.
Pepa rekutsvagisa riri kutengeswa rinogona kunge riri dambudziko rekunyora. Kuchave nekuve nemamwe mapoinzi aunofanirwa kudzokorora mupepa rako, uye iwo anofanira zvakare kuve akaoma kuti iwe uzive. Kunyange zvakadaro, iwe uchaona kuti ichi chishandiso chikuru chekudzidza.
Paunosvika muzvikamu zvaunoziva kuti waita nemazvo, gadzira runyorwa rwezvakakosha zvikamu zvebepa rako. Ipapo, iwe unogona ipapo kuita kumwe kupfuudza zororo kune mumwe munhu uye kutanga pamusoro.
Iwe zvakare unodawo kuve neshuwa kuti iwe uteedzere mafambiro anouya nebhuku. Dzimwe nguva, uchafanirwa kuisa rumwe ruzivo mune rimwe bhuku kuti zvive nyore kwauri kuti utevere ruzivo iwe rwawakatowana kare. Iyi inzira yakanaka yekutora mazano ezve zvinhu zvaunogona kuita kuitira kuti rako rekutsvaga rinyanye kunakidza.
Paunotanga kushanda pabepa, iri zano rakanaka kuve nechokwadi chekuti une zvese zvaunowana zvakagadzirira. Nenzira iyi, kana paine chinhu chinouya kana iwe ukachinja pfungwa dzako, unogona kungoita chokwadi chekuti unoziva zviripo uye kuti zviripi kuti usatambise nguva yakawanda nesimba kuedza kuzvigadzirisa.
Iwe zvakare uchaona kuti nekuwana rekutsvagisa pepa rekutengesa, iwe unowana nzira yakanaka yekuzvibatsira pachezvako iwe neyakafanira kuita iwe paunonyora rako rako bepa. Ichi chinhu chausingazogara uine nguva yekuita. Nekutora mukana wekutsvaga iwe kwaunogona kuwana, iwe unenge uine chakakosha chishandiso chekushandisa apo iwe uchidzidzira kunyora ako mapepa.